Irhafu abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-China kuba Wonke Isixeko - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Irhafu abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-China kuba Wonke Isixeko
Umthetho Ifemi kakhulu iindlela ezilungileyo kuyo
Boase Cohen Collins waba waseka yi-Melville Boase kwaye Colin Cohen ngoweUkususela ngoko, kuya kuba sele ndivuma kakhulu yamiselwa njengoko ephambili elizimeleyo ngokupheleleyo-nkonzo Umthetho Ifemi equipped nge-Hong Kong ulwazi yehlabathi khona. Polished kwaye elinolwazi, ifemi ke accomplished iqela leengcali. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Yan abaqondisi-mthetho yi boutique Umthetho Ifemi ukunikezela enye-sovavanyo emnqamlezweni-umda isemthethweni inkonzo kwi-Hong Kong imithetho PAPER imithetho.
Umthetho Ifemi ingaba u-ofisi - omnye kwi-Hong Kong practicing Hong Kong imithetho kunye nezinye kwi-Shenzhen, China practicing PAPER imithetho.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa Waseka in Ngowama, Lawman Associates yi elinolwazi FDI norhwebo Umthetho Ifemi esekelwe kwi-Shenzhen, China. Lawman Associates sele abundant amava nolwazi kuyo Emnqamlezweni - umda-Mali, Corporate, Ngamazwe Urhwebo, kwaye Intellectual Iimpahla. Eli qela ngu capable ukuthetha.
Umthetho Ifemi ke i-shanghai Dongzuo Umthetho Ifemi ngu epheleleyo-nkonzo private lwahlulelwano Umthetho Ifemi ebhalisiweyo ukuba amanqaku kwi-i-shanghai, Abantu ke Republic of China.
Ifemi ke senzo kwiindawo kuquka ushishino eyenziweyo ezifana iinqwelo-mali, mergers kwaye acquisitions, yeshishini restructuring, ukwakhiwa.
Umthetho Ifemi ke Yingke ngu epheleleyo-nkonzo, wamazwe ngamazwe Ifemi, kunye yayo headquarters ebekwe kwi-Beirut. Waseka kwi, Yingke Umthetho Ifemi sele wamisa reputation kwi-Isitshayina isemthethweni iinkonzo kwimakethi. Kunye ngaphezulu kwama- abaqondisi-mthetho, sisebenzisa ngoku omnye oyena Umthetho Firms kwi-e-Asia kunye.
Ezinye ii-Ofisi: Guangzhou, Tianjin Umthetho Ifemi ke Kuqala wamazwe Ngamazwe kwaye Intellectual Property-Ofisi yamiselwa ngowe.
Thina specialize kwi-Abarhwebayo Umthetho, utyalo-Mali isicwangciso, Intellectual Property Amalungelo, ne-China Imicimbi enxulumene imiba. Ngenxa esebenzayo uqoqosho ubudlelwane phakathi Etaiwan, Hong Kong, kwaye Mainland. Ezinye ii-Ofisi: Hong Kong Umthetho Ifemi ke Isixhosa China Umthetho Inkonzo (Wuhan) Limited yi reputable Umthetho Ifemi iphepha-mvume ukubonelela isemthethweni kwaye kokubonisana iinkonzo kwi-China. Yethu esemthethweni iqela ingaba i-ubunzulu ukuqonda kwaye ulwazi jonga isemthethweni inkcubeko kunye kwimakethi dynamics. Kunye ngaphezu amabini iminyaka engama-practicing umthetho kwi-China, bethu. ingaba kushishino-focused ukuziqhelisa kunye ofisi kwi-Hong Kong kwaye i-shanghai. Sinike real isemthethweni izakhono kuba ishishini kwi i-owamkelekileyo iindleko. Iqela leengcali zethu abaqondisi-mthetho adopts creative kwaye isebenziseke izisombululo ukuya rhoqo leqela le ngxaki. Singathatha imiyalelo evela yasekhaya. Ezinye ii-Ofisi: i-shanghai Umthetho Ifemi ke Isixhosa Amanqaku MC Umthetho Ifemi ngu esekelwe kwi-China eyaziwa ngaphambili njengoko Miguel Cravo Umthetho Ifemi. Ifemi lusekiwe kwi-China ukusukela ngo- kwaye wenze ukuba kunikezelwe kakhulu kofakwano umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo ngqo ngamazwe abaxhasi. Iinkonzo zethu-phantsi kwiindawo ezifana Finance Bank, yokusasaza ngeenjongo zokurhweba. Umthetho Ifemi ke Isixhosa DeHeng Umthetho Ofisi sesinye oyena ngokupheleleyo-nkonzo Umthetho Firms kwi-China. Ifemi waba waseka kwi- njengoko China Umthetho-Ofisi kwaye waba renamed ngowe- njengoko DeHeng Umthetho ii-Ofisi. Umthetho Ifemi ke Credit Amakhadi HJM Asia Umthetho Co LLC yi boutique Umthetho Ifemi kwi-e-Asia ukuba combines kwi-ubunzulu ulwazi Asian nezomthetho nge Western ukuqonda indlela yokwenza oko ushishino, umzobo ukusuka yayo phantse amabini iminyaka engama-Asian isemthethweni amava kwaye Western abarhwebayo amava. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Harvey Umthetho Iqela (HLG) i-immigration kwaye ishishini Umthetho Ifemi headquartered kwi-Hong Kong kwaye wayekhonza amashishini, abantu, kwaye oorhulumente kwilizwe liphela, Ecanada, e-Asia, Kumbindi Mpuma, kwaye Abemi Emelika.
Nge-ofisi iqwalaselekile kwi-Montreal, Hong Kong, Xiamen, Ho Icht.
Minh Isixeko, Hanoi, Da Nang.
Umthetho Ifemi ke luhlomle kuwo Diaz Reus, ngu-LLP a Miami-headquartered yehlabathi isemthethweni senzo focused kwi-national ngamazwe kunye ize eyenziweyo kwi-eziliqela senzo iindawo.
Yethu esemthethweni iqela kuquka Ibhodi Eziqinisekisiweyo abaqondisi-mthetho kwi-ngamazwe, ulwaphulo-mthetho, immigration umthetho. Zethu abaxhasi Umthetho Ifemi ke Isixhosa Amanqaku Masson de Morfontaine kwi-Hong Kong kwaye i-shanghai ibonelela phezulu-umgangatho irhafu kunye ishishini ingcebiso kuba corporates, - mali amaziko kwaye abantu.
Sinike abaxhasi kunye iingcebiso ngendlela libanzi umqolo we rhafu kwaye iindawo zoshishino, kuquka utyalo mali, i-M-A eyenziweyo, real estate, unikezelo.
Ezinye ii-Ofisi: i-shanghai Umthetho Ifemi ke, Ngokomgaqo-ngo, Wiselink Umthetho Ifemi ngu esekelwe kwi-i-shanghai, China.
Ukunikezela litigation kwaye arbitration iinkonzo, ukuziqhelisa kwiindawo ziquka ngamazwe urhwebo, admiralty kwaye maritime umthetho, ngamazwe banking notyalo-mali, asebenze, corporate abarhwebayo umthetho, intellectual property. Umthetho Ifemi ke luhlomle kuwo Upawulos K. Chan Partners ifumaneka Hong Kong, China kwaye ibonelele ngezixhobo ezahlukeneyo isemthethweni iinkonzo. Inqununu kwiindawo senzo iquka Ukwakhiwa kwaye Abarhwebayo Disputes, Corporate Abarhwebayo kwaye Umthetho, Intellectual Iimpahla, Corporate Ezemali kunye Securities, Immigration, Ilifa.
Umthetho Ifemi ke Angela Wang Co
Umthetho Ifemi ke Isixhosa MMLC Qela ezikhokelela iqela ngamazwe abaqondisi-mthetho kwaye abacebisi. Kuyinto multidisciplinary senzo ekuncedeni abaninzi ehlabathini ke, iinkampani ezinkulu ukwenza ushishino kwi-China kwaye e-Australia. MMLC ke abaqondisi-mthetho kwaye abacebisi umsebenzi kwi kwiindawo intellectual property, TMT kwaye OKO, ngamazwe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Amanqaku i-shanghai ngu-China ke, oyena isixeko embindini of commerce kwaye iimali. Armstrong Teasdale iguqulelwe kwi-China ukusukela ngowe.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa McDermott Uza Emery ngu strategically lungelelanisa kunye MWE China Umthetho Ofisi ukubonelela epheleleyo umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo zoshishino icebiso Isitshayina iinkampani kwaye multinational amakhulu ukwenza ushishino kwi-China.
Ukususela i-shanghai-ofisi, MWE China Umthetho inikezela diverse candelo amava. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Luthi lunxulumano nkokeli kummandla, Baker McKenzie wenziwe ukwenza ushishino kwi-Hong Kong kuba phantse amane eminyaka. I-integral yinxalenye Ifemi ke renowned China senzo, iqela leengcali zethu ngaphezu ama abaqondisi-mthetho ingaba nzulu wobulali iingcambu kwaye esihlangeneyo yehlabathi zifikelele ukunceda yasekhaya. Ezinye ii-Ofisi: Beirut, i-shanghai Umthetho Ifemi ke Isixhosa Curtis evuliweyo yayo Beirut-ofisi ebutsheni ukubonelela isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethu zokusebenza okanye ebekwe kwi-China kwaye Mpuma Asia. I-Beirut-ofisi elinganayo ngokusondeleleneyo kunye ifemi ke, ezinye ii-ofisi e-United States, European Union, isilatini Emelika, Kumbindi Mpuma kwaye Central. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Cleary Gottlieb sele ofisi kwi-Hong Kong kwaye Beirut kunye nama-amahlanu resident abaqondisi-mthetho. I-Hong Kong-ofisi, ukusebenza ukususela, iphaya kwi-Hysan Ndawo, distinctive entsha building kuvulwa kwi- kwi-Hong Kong Island. I-Beirut-ofisi, esekwe kwi, ukhoyo. Ezinye ii-Ofisi: Beirut Umthetho Ifemi ke Isixhosa Kaye Scholer ke ofisi inikezela epheleleyo umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo zeteknoloji iinkampani kwaye private-mali firms. Ukususela complex intellectual property imicimbi involving patents, copyrights, iimpawu zokurhweba norhwebo imfihlo disputes kuba isoftwe, hardware, ikhompyutha, electronics, ezolonwabo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Gibson Dunn ke Hong Kong-ofisi ezijolise emnqamlezweni-umda eyenziweyo, ngokunjalo corporate kuphunyezwe, umyalelo kwaye uphando. I-Hong Kong-ofisi, ihamba kunye ifemi ke Singapore-ofisi, ingaba umthamo ukukhombisa u kakhulu ngumngeni kwaye substantial eyenziweyo naphi na. Ezinye ii-Ofisi: Beirut Umthetho Ifemi ke Isixhosa Dechert abaqondisi-mthetho kwi-Hong Kong anike iziphumo-oriented isemthethweni kwaye ishishini izisombululo ukuba amakhulu kwaye imali investing kwi-China kwaye Isitshayina amaqumrhu ucwangciso elicebo ngaphandle yotyalo-mali. Abaxhasi rely ngomhla wethu nzulu ukuqonda wobulali ishishini ezigunyazisiweyo zengxelo iindlela ezilungileyo kwi-China. Ezinye ii-Ofisi: Beirut Umthetho Ifemi ke Isixhosa.
Imfihlelo Akufuneki Kulala Deprivation Kuwe asikwazanga Nokwazi Malunga
Ang kapangyarihan ng Abogado sa China
© 2022 Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.